Indlu yeLizwe yaseVilla Alegre
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPatricia
Indlu yelizwe, i-rustic, ikhululekile kakhulu kwaye intsha, imizuzu emi-5 ukusuka kumasipala waseSocorro, eSantander, eColombia, i-100% yendlela egangathiweyo, umbono ogqwesileyo weYarigüies National Park, i-hammocks emnandi, amagumbi akhululekile kunye namatsha, ishawa ngamanzi ashushu, ikhitshi kunye isitovu segesi, ifriji, indawo yokupaka iimoto ezi-6, indawo ezolileyo nekhuselekileyo. Ukufikelela ngokulula kwiindawo zabakhenkethi eSantander, ezifana neSocorro, iSan Gil, iBarichara, iPáramo, iCuriti, iPalmas del Socorro, iPanachi National Park.
Ummangaliso wokuhlala kunye kwaye ungqongwe yindalo, ukuziva iinkomo zisondele kodwa ngaphandle kwengozi, ukusela ubisi olutsha, ukusengwa nje. Ukuphumla kwii-hammocks ezijinga kwipaseji, ukutsha kwemozulu kunye nempepho epholileyo ehlaziyayo, nangona amaqondo obushushu aphezulu eSocorro okanye eSan Gil.
20" TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
Yindawo ezolileyo kakhulu, abamelwane abanobuhlobo kakhulu kwiminyaka engaphezu kwama-20 eyadlulayo.
Deseo compartir con personas muy especiales la casa de la Finca que hace más de 35 años disfrutamos y amamos. Esperamos que nuestros visitantes disfruten tanto como mi familia del placer de descansar en una pequeña finca a las afueras del Pueblito Viejo de todos los Colombianos, el Socorro - Santander - Colombia. Que sientan el placer de ver al amanecer la Serranía de los Yarigüies, en la noche las luces de los pueblitos vecinos, el aroma de los árboles, la leche fresca recién ordeñada, la experiencia del campo y la cercanía a todos los atractivos turísticos del Socorro y sus alrededores como San Gil, Pinchote, Barichara, Guane, Villanueva, El Páramo, Palmas del Socorro, Simacota, Palmas del Socorro. Nuestra casa es modesta pero muy acogedora, fresca, placentera, invita a la unión familiar y a recargarnos de buena energía. Bienvenidos.
Deseo compartir con personas muy especiales la casa de la Finca que hace más de 35 años disfrutamos y amamos. Esperamos que nuestros visitantes disfruten tanto como mi familia del…
Siya kufumaneka kuyo nayiphi na imfuneko eyongezelelweyo, kwaye ngokusisigxina sibe nenkampani ekufutshane ne-Butler yefama kunye nosapho lwakhe, (malunga ne-10 mt), ngaphandle kokuphulukana nemfihlo yabo okanye ukuzimela kwindlu. ukhuseleko olupheleleyo.
Siya kufumaneka kuyo nayiphi na imfuneko eyongezelelweyo, kwaye ngokusisigxina sibe nenkampani ekufutshane ne-Butler yefama kunye nosapho lwakhe, (malunga ne-10 mt), ngaphandle kok…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Socorro